Doorashadii Soomaaliland Iyo Raadka Ay Reebtay? W.Q. Rashiid Sheekh Cabdillaahi(Gadhweyne) | ToggaHerer
← Daawo:” Hala yaabina Hadii wax la canaanto, Sideedaba baniiadamku waxa uu jecelyahay in wax walba hagaagaan Isbedelka way necebyihiin Dadku ” Muuse Biixi oo ka hadlay Waayo Aragnimadii ay ka dhaxleen doorashadan cusub
Mudanayaasha Aqalka Golaha Wakiilada Somaliland ayaa maanta meelmariyey Ajandahooda. →
Doorashadii Soomaaliland Iyo Raadka Ay Reebtay? W.Q. Rashiid Sheekh Cabdillaahi(Gadhweyne)
Published on November 28, 2017 by Magan
Ka soo qaad, aniga, adiga iyo ayada iyo hebello kale, in aynu nahay koox dad ah oo shurko ku ah dano ka dhexeeya iyo lagama-maarmaan aan inoo kala go’ayn oo aynaan ku kala tagi karin. Inta aynaan magac kale ba la bixin, waxa aynu nahay innaga ama dheh annaga. Ka soo qaad, waxa aynu rabnaa in aynu dhexdeena ka dooranno cid ama qof aynu u xilsaarno hoggaaminbta maamulka danaha aynu ku shurugga nahay. Innaga oo innaga ah baynu qof innaga ah iska dhex dooraynaynaa oo xilsaaraynaa. Haddii ay laba iyo saddex ama ka badani ba isu soo taagaan xilkaas, giddigood ba waa innaga ee shisheeye innaga baxsan ma aha. Sow ma aha sidaas? Haddii aynu dalka wada leenahay oo aynu qaranka shurko ku nahay, magaca dalka waxa aynu ku nahay innaga. Mar haddii ay sidaas tahay, innaga oo innaga ah ayeynu dooranaynaa madax qaran oo innaga ah. Laba iyo saddex ba kuwii isu soo sharaxaa ba waa innaga; kii ku soo baxaa na waa innaga. Sow ma aha?Alle Mahaddii, doorashadii ka dhacday dalkeenna Soomaaliland nabad bay ku dhammaatay. Muuse Biixi baa Madaxweyne dalka ka noqday oo caawa ba lagu negi yahay. Werwerkeedii waxaa dhammeeyey Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirro- oo ahaa ninkii, run ahaan, Muuse jagada ku la tartamayay, markii uu ku dhawaaqay in uu aqbalay go’aanka ka soo baxay Guddiga Doorashooyinka. Hayeeshee geeddisocodkii doorashadani waxa uu soo debedsaaray xumays badan oo halis ku ah qarannimada dalka. Meesheeda u daa farxadda nabadgelyada uu dadku, 13kii bisha Noofembar, sannadka 2017, ku codeeyey ee adduunku ka maragkacay. Se waxa ila roon in aan taas riyaaqeedu ina la tegin oo aanu ina illowsiin dhibaatooyin badan oo uu ololahii doorashadu muujiyey, kuwaas oo ka soo jeeda dhaqanka siyaasadeed ee ilaa hadda aynu ku soconno.
Xaaladda hore waxa ay tusaale u tahay bulsho mid ah oo danaheeda, ayada oo mid ah, ka tashanaysa oo taladeeda na cid iyada ka tirsan u dhiibanaysa. Kii ay doortaan ba waa u madax. Xaaladda labaad waa laba qolo oo aan wax ba isu ahayn; waxna aanay ka dhaxaynin, ama ka dhexayn karin. Xidhiidhkoodu waa isburisada shisheeye iyo sokeeye. Heshiiskoodu sal adag ku ma fadhiyo. Muranka u yar ee dhexdooda yimaadda ayaa kala tuura. Xoog bay wax ku kala qaadaan ama ku kala goostaan, wax se isku ma darsadaan. Haddii aynu dib isu gu noqonno, doorashadan ay Soomaaliland gashay, 13kii Noofembar, 2017kii, iyo ololeheedii dabada dheeeraa, labadaas muuqaal ee kor ku xusan, kee bay leeyihiin? Sow lagu ma kala ahayn ayaga iyo annaga, shisheeyeiyo Sokeeye? Innagu aynu qaadanno jagada, iyo innagu aynu qaadanno oo ayagu yey qaadan; sow ma ahayn? Inna ba miyaa la moodayey dad is ah oo mid ah oo dal iyo dawlad mid ah ku shurug ah oo madaxdooda iyagu iska dhex dooranaya? Afkeed ba lagu ma wada hadlayn.